Anjanahary : voaroba ny fiangonana FJKM - Informations et Actualités sur Madagascar
Société Anjanahary : voaroba ny fiangonana FJKM
Anjanahary : voaroba ny fiangonana FJKM
by Alpha world on 06 h 39 in Société
Mafana ny asan-jiolahy eny Anjanahary sy Manjakaray eny amin’izao fotoana izao. Lasibatra ihany koa ny fiangonana ka omaly maraina, taitra ny tompon’andraiki-piangonana eny amin’ny FJKM Anjanahary Maritiora vokatry ny fahavakisan’ny fiangonana. Tany amin’ny trano fiasan’ny mpitandrina, ny efitra nisy ny vatavy fitoeram-bola no namantana ireo olon-dratsy rehefa avy namoha an-
keriny ny varavarana. Solosaina sy kojakoja amin’ny informatika maromaro no very tao amin’io efitra fiasan’ny pastera ao amin’ny FJKM Anjanahary Maritiora io. Nisy koa ny antontan-taratasy simba sy very nandritra izany. Novakin’ireo olon-dratsy koa ilay vatavy be fitoeram-bola ary nisy vola very tao, saingy tsy fantatra mazava izay tena tentim-bidin’izany. Ny alatsinainy alina no tombanana ho nandrobana ity trano fivavahana ity ka nidina avy hatrany teny an-toerana ny mpitandro filaminana, omaly, raha vantany vao nampandrenesin’ny tompon’andraikitry ny fiangonana. Misokatra ny famatorana ankehitriny.
By Alpha world at 06 h 39